You maara ma a na-edochi ihuenyo mbụ mgbe ị na-edozi ekwentị mkpanaaka? Bata kụziere gị otu esi amata ezigbo ihuenyo na ihuenyo adịgboroja
site na nhazi na 20-08-18
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ezutekarị ọnọdụ nke na ekwentị mkpanaaka ihuenyo agbajikwa site na mberede, ụfọdụ na-agbajikwa iko mkpuchi, ụfọdụ ndị dị n'ime ihuenyo adịghị egosipụta na-agbajikwa. Onye nrụzi nke atọ ga-ajụkarị gị ma ịchọrọ nke mbụ ma ọ bụ nke nkịtị. Jen ...
BPM Era N'ikwu okwu banyere ngwaahịa a, ụfọdụ ndị ga-ahụrịrị ya. N'ezie, n'ikwu okwu, a gaghị akpọ ngwaahịa a ekwentị mkpanaaka. Akụrụngwa a pụtara na narị afọ nke 20, mgbe Shanghai bụ obodo mbụ mepere ọdụ paging. Mgbe nke ahụ gasịrị, ngwa BP batara na eze ...
Mgbe ngosipụta nke ekwentị mkpanaaka ngosi ihuenyo, ebe a ga-enwe mmeri nke ekwentị ngosi ngosi ihuenyo na-aga
Ikike abụwo ụzọ dị mkpa na mmepe nke ihuenyo ekwentị mkpanaaka, mana ekwentị mkpanaaka nwere ihe karịrị sentimita 6.5 adabaghị maka ijide otu aka. Ya mere, o siri ike ịnọgide na-agbasa ogo ihuenyo, mana ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụdị ekwentị ejirila ...
Gini mere ihu igwe ji enyocha ihu nke ọma mgbe ekwentị mkpanaka dị na tebụl? Ọ bụghị naanị banyere nzuzo
Ka m buru ụzọ juo gị ajụjụ A na-etinyekarị ekwentị mkpanaaka na tebụl mgbe ejighị ya, you na-etinye ngebichi elu ka ọ bụ ngebichi ahụ? Ma ị maara ihe? Tinye ekwentị mkpanaaka na desktọọpụ na ihuenyo ala. Ga-amata ihe kpatara ị gụchara ihe ndị a? Atọ uru nke ...